DegDeg: Wasiirkii Difaaca ee LEMMA MEGERSA oo la Galiyey Xabsi Guri – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DegDeg: Wasiirkii Difaaca ee LEMMA MEGERSA oo la Galiyey Xabsi Guri
Wasiirka gaashaandhigga Itoobiya iyo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo hal mar saaxiib dhow la ahaa Lemma Megerssa ayaa xabsi guri la galiyay, ilo wareedyo badan ayaa u xaqiijiyay Addis Standard. Wararka xanta ah ayaa ku baahinayay warbaahinta bulshada inteeda badan shalay.
Ethiopia Insider, oo ah warbaahin maxalli ah oo maxalli ah oo fadhigiisu yahay internetka, ayaa sidoo kale xaqiijiyay warka daqiiqado yar ka hor.
Sida laga soo xigtay sedex ilo oo la hadlay Addis Standard, habeenimadii Talaadada waxaa u sheegay General Adem Mohammed, Taliyaha Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya inuu “kusii nagaado” hoyga uu ka degan yahay wadada Bole “illaa ogeysiin kale laga sii dhigo. soo saaray. ”
Shalay, qaar ka mid ah shaqaalihiisii ​​Wasaaradda Gaashaandhigga, oo uu ka mid ahaa xoghayntiisii, ayaa laga horjoogsaday inay galaan xafiiskiisa, oo markii dambe ay baarayeen xubno ka tirsan ciidamada booliiska federaalka, laba ilo wareed oo ka tirsan Wasaaradda ayaa xaqiijiyay.
Lemma waxaa loo magacaabay Wasiirka Difaaca Abriil 18 2019. Wuxuu taariikh u sameeyay Madaxweynihii ugu horreeyay ee gobolka oromada ee abid loo doorto Golaha deegaanka (Caaffee) ee rabshadaha ba’an ee Oromada bishii Oktoobar 2016. Gudoomiyaha Ururka Oromo Democratic Democratic Organisation (OPDO). Laakiin bishii Febraayo 22 2018 wuxuu kursigiisa u banneeyay PM Abiy, ka dib ku xigeenkiisii, tallaabo u hagtay jidadka uu Abiy ku wareegi karo jagada madaxweynenimo ee EPRDF, oo ah jagada ugu sareysa ee uu ku noqon karo ra’iisul wasaaraha soo socda ka dib is casilaaddii ra’iisul wasaarihii hore Hailemariam. Desalegn usbuuc ka hor.
warbaahinta itoobiya ayaa cadeeyey arinka xadhiga iyadoo xidhiidhkoodu xumaa baryahan danbe.
ADDIS STANDARD (@ADDISSTANDARD) FEBRUARY 22, 2018
Laakiin xiriirka Lemma ee PM Abiy ayaa sii xumaaday ka dib markii uu si cad u dhalleeceeyay tallaabada PM ee ay ku baabi’ineyso EPRDF iyadoo lagu taageerayo xisbiga Providenceity Party (PP), oo uu hago falsafada Abiy ee “Medemer” (Synergy). Bishii Nofeembar 2019, Lemma wuxuu sheegay inuusan u diiwaan gashanayn labadaba “Medemer” falsafad iyo midaynta EPRDF inay samaysato Xisbiga Barwaaqada, tallaabo ay dad badani u arkeen inay dhabar jab weyn ku tahay PM Abiy.
In kasta oo Lemma uu ku dhawaaqday inay “soo koobeyso kala duwanaanshihiisa oo ay wada shaqeeyaan,” xiriirka ka dhexeeya labada xul ee xulafadii hore weligood dib ugama soo kabsan ilaa markaas. Sikastaba, xiisadda ayaa kacsaneyd inta udhaxeysa PM Abiy iyo Lemma kadib dilkii farshaxanka Oromada Haccaaluu Hundessa iyo qabqabashadii jabsatay ee sababay hogaamiyaasha mucaaradka Oromada, saxafiyiin, u dhaqdhaqaaqayaasha iyo aqoonyahanada. Ilo-wareedyo dhowr ah ayaa u xaqiijiyey Addis Standard in Abiy ku eedeeyey Lemma inuu xiriir la leeyahay Jawar Mohammed, PM Abiy uu mar qudha dhaleeceeyey canaaniinta mucaaradka, oo hadda xabsi ku jira.
Xusuus-qorka tifaftiraha: Addis Standard waxay lahaan doontaa daah-sooc cadaan ah oo ku saabsan wararka baahinta baahsan ee ku saabsan joojinta Lemma Megerssa iyo laba kale oo xubin ka ah Golaha Dhexe ee ODP iyo Golaha Xiriirka.
IN KA BADAN 20 qof OO LAGU DILAY GOBOLKA BENISHANGUL GUMUZ
Jihaadiyiin ayaa tobaneeyo ku diley weerar ka dhacey Nigeria -